Ny isa "Add-to-cart" dia misy ihany ny fividianana amin'ny Internet. Miahiahy aho fa mety mividy matetika toy ny matetika ny mpampiasa finday, saingy mazàna mividy any amin'ny magazay. Ohatra, matetika aho mampiasa finday hijerena ireo adiresy fivarotana / ora fanokafana. Misy porofo fanampiny ve milaza fa ireo mpitsidika amin'ny fitaovana takelaka dia lavitra eo amin'ny lalan'ny fanovana?
Hevitra tsara, MarketingXD, ary iray izay tokony nokasihintsika. Tena tsy noeritreretiko hoe kely vidy kokoa ny mpampiasa finday… sarobidy ihany izy ireo, raha tsy betsaka! Ary mitombo ny lazan'izy ireo!